December 2016 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Android Application Android Map GPS and Google Maps Phone Application
တိကျပြည့်စုံပြီး အသံနဲ့ပါ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့ Android သုံး Open Source Map ( OsmAnd) v2.5.4
Maung Pauk at 5:44:00 PM 0
ကျွန်တော်တို့ အများစုသုံးနေတဲ့ Google Map ထက် ပိုကောင်းပြီး တိကျပြည့်စုံတဲ့ Map လေး တစ်ခု ပေးပါမယ်.. လမ်းခရီးအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ ခရီးအကွာအဝေး၊ သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း၊ သွားနေတဲ့ကားရဲ့ မိုင်နှုန်းတွေကအစ ဖေါ်ပြပေးတဲ့အပြင် အသံစနစ်နဲ့ပါ အချက်ပေးလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..
Install လုပ်နည်းနဲ့ သုံးနည်းအခြေခံ
App ကိုဒေါင်းပြီး Install လုပ်ပြီးသွားရင်..
ပထမဆုံး ဖုန်းမှာ Location ကို On ထားပေးရပါမယ်.. အင်တာနက် ဖွင့်ထားရပါမယ်..
OsmAnd ကိုနှိပ်ပါ.. Get Start ကိုနှိပ်ပါ..
Skip Searching Map ကနေ Download Map မှာ Select Another Region ကိုရွေးပါ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ Word Map တစ်ခုလုံးကိုဒေါင်းမယ်ဆို ဖိုင်ဆိုဒ်က ကြီးလွန်းနေပြီး မလိုအပ်လို့ပါ.. ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မို့လို့ Asia>Myanmar ကိုရွေးပြီး Standard Map ကိုရွေးပြီး ဒေါင်းလုပ် ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးဒေါင်းလိုက်ပါတယ်.. အခြားသူတွေ အခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လိုချင်ရင်လည်း ရွေးချယ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...
World Overview map ကိုဒေါင်းမှာလား မေးရင် Later ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..
Map downloaded ပေါ်လာရင် GO TO THE MAP ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
အပေါင်းကိုနှိပ်ပြီး Map ကို Zoom ချဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. ကိုယ့်နေရာဘယ်မှာရှိသလဲ ကြည့်ဖို့ My Location ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
အပေါ်က မှန်ဘီလူးလေးပုံကိုနှိပ်ပြီး ကိုသွားချင်တဲ့ နေရာကို ရှာပါ..
သွားချင်တဲ့နေရာကိုရှာတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လို ရှာလို့မတွေ့ရင် မြန်မာလိုရှာပါ.. မြေပုံကတော့မြန်မာယူနီကုဒ်ကိုသုံးထားပါတယ်..
ရှာလို့တွေ့တဲ့အခါ Show on Map ကိုရွေးကြည့်လိုက်ပါ.. ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာရဲ့ မြေပုံကိုမြင်ရပါမယ်..
အသံစနစ်ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အခါ ကိုယ်ပြောစေချင်တဲ့ ဘာသာစကားကိုရွေးပေးလိုက်ပါ.. ကျွန်တော်ကတော့ TTS English ကိုရွေးပေးပါတယ်...
ပြီးရင် Go ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် သွားရမယ့်လမ်းကြောင်း၊ ခရီးအကွာအဝေး၊ စတင်ချိန်၊ ရောက်ရှိမယ့်အချိန် တွေကို စာနဲ့ရော အသံနဲ့ပါ ပြောပြပေးပါတယ်... သွားနေတဲ့ မိုင်နှုန်းကိုပါပြပေးပါတယ်..
ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း ကွေးရမယ့်အနေအထား၊ အဝိုင်းပတ်ကနေ ဘယ်လမ်းအတိုင်းထွက်ရမယ်ကအစ အကုန်လုံးအသေးစိတ်ကို ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ ပြောပေးပါတယ်...
တကယ်လို့ မြေပုံကရွေးချယ်ထားတဲ့ လမ်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်သိတဲ့အခြားလမ်းကသွားမယ်ဆိုလည်း ကိုယ်အသစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းနဲ့ပဲ ပြန်လည်တွက်ချက် လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်...
အချို့နေရာတွေမှာ လမ်းနာမည်တွေ နည်းနည်းလွဲနေကလလွဲရင် တော်တော် ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ မြေပုံလေးပါ.. လမ်းခရီးသွားတဲ့အခါ အင်တာနက်ကို ဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပေမယ့် အင်တာနက် မမိတဲ့နေရာတွေမှာလည်း လမ်းကြောင်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြောပြလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပြီး အင်တာနက် မိတဲ့အခါ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သွားပါမယ်...
Download OsmAnd v2.5.4.apk : 52.3 Mb
Android Application Phone Application Translator
Maung Pauk at 3:51:00 PM 0
ဒီ VoiceTra လေးဟာ မြန်မာလိုပြောတဲ့အသံကို အခြားဘာသာပေါင်း ၂၉ မျိုးထိ ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ဂျပန်နိုင်ငံက ရေးသားတာဖြစ်ပြီး မြန်မာသံကို ကောင်းကောင်း နားလည်ပါတယ်..
Setting မှာ You ကို မြန်မာ ကိုရွေးချယ်ပြီး အခြားမှာ ကိုယ်ဘာသာပြန်စေချင်တဲ့ဘာသာကို ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်...
သိပ်ထွေထွေထူးထူးတော့ Setting လုပ်စရာမလိုပါဘူး..
အင်တာနက်ဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပြီး Microphone Button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကာ မြန်မာလိုစကားပြောကို ဘာသာပြန်ခိုင်းနိုင်ပါပြီ...
VoiceTra ( Voice Translator ) v5.4.3 apk : 9.1 Mb
Android Application Facebook Phone Application
Color Status တွေ တင်လို့ရတဲ့ Facebook Official Version 106.0.0.26.68
တင်ပေးမယ်လုပ်နေတာ တစ်ပတ်နီးပါးတောင်ရှိသွားပြီ.. ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Facebook version 106.0.0.26.68 က Color Status တွေ တင်လို့ရပါပြီနှော်.. သိပ်ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမရှိပါဘူး.. Play Store က မရသူတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ...
Download Facebook 106.0.0.26.68.apk : 60.2 Mb
IDM 6.27 Build2Full
Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း 6.27 Build2ကို Full Version ဖြစ်အောင် Patch နဲ့တကွ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Setup နဲ့ Install လုပ်.. ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေနားက Tray ထဲမှာ IDM လေးရှိနေရင် ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်..
Download IDM 6.27 Build2Setup : 6.6 Mb
Android အတွက် FIFA Mobile Soccer 3.2.0
Android နဲ့ ဘောလုံးဂိမ်းကစားသူတွေအတွက် ဒီဇင်ဘာ 12 ရက်နေ့က Update ပေးလိုက်တဲ့ FIFA Mobile Soccer 3.2.0 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဂိမ်းကစားရတာ ပိုမိုသွက်လက်လာပြီး ရုပ်ထွက်ပိုကောင်းလာပါတယ်... Player ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်အောင် Feature ထပ်မံထည့်ပေးထားပါတယ်..
Android 4.1 နဲ့ အထက်တွေ ကစားနိုင်ပါတယ်... အင်တာနက်တော့ လိုပါမယ်..
FIFA Mobile Soccer 3.2.0 apk : 65.1 Mb
ကိုယ့် Facebook Profile ကို ဘယ်သူတွေ ဝင်ကြည့်သွားတာလဲ သိနိုင်မယ့် Who Viewed My Profile Stranger v2.28
Maung Pauk at 10:34:00 PM 0
ကိုယ့် Facebook Profile ကို ဘယ်သူတွေ ဝင်ကြည့်သွားတာလဲဆိုတာ သိချင်သူတွေအတွက် ဒီဇင်ဘာလ 16 ရက်နေ့က နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Who Viewed My Profile Stranger v2.28 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Stranger တွေသာမက Mutual Friend တွေဝင်ကြည့်တာကိုပါ သိနိုင်တဲ့ Feature ကလွဲရင် သိပ်ထွေထွေထူးထူးတော့ မပြောင်းလဲပါဘူး.. နည်းနည်း သွက်သွားတာကလွဲရင်ပေါ့..
Who Viewed My Profile Stranger v2.28 apk : 6.7 Mb
Android တွေကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ အမြန်ဆန်ဆုံး Root နိုင်တဲ့ KingRoot apk 5.0.1 Latest
Maung Pauk at 11:11:00 PM 0
Android 6.0 ထိ ဖုန်းထဲမှာပဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ Root ဖောက်နိုင်တဲ့ KingRoot နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း 5.0.1 ဖြစ်ပါတယ်.. ကွန်ပျူတာမလိုပါဘူး.. Security တော်တော်မြင့်တဲ့ Android ဖုန်းတွေကိုတောင် လွယ်လွယ်နဲ့ Root ဖောက်ပေးနိုင်ပြီး SuperUser ကိုလည်း အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ error ကင်းအောင် ထည့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်.. ဘယ်ဖုန်းတွေကိုထိ ဖောက်နိုင်လဲ. ဒေါင်းပြီး စမ်းကြည့်ကြပေါ့လေ..
KingRoot apk 4.9.7 : 18 Mb
Pokémon GO - Latest version 0.49.1
Maung Pauk at 10:27:00 PM 0
Pokémon GO ကစားကြတဲ့ Android Gamer များအတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့က နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Pokémon GO ဗားရှင်း 0.49.1 ဖြစ်ပါတယ်..
Download Pokémon GO 0.49.1 apk : 88.3 Mb
Xioami က ထုတ်တဲ့ Product တွေ၊ App တွေရဲ့ Latest Update တွေရရှိနိုင်မယ့် Xiaomi MIUI Forum apk 1.0.5
Xiaomi MIUI Forum APK ကို Install လုပ်ပြီး အကောင့်ဖောက် Log in ဝင်ထားရုံနဲ့ Xioami ကထုတ်လုပ်တဲ့ Product တွေရဲ့ Preview တွေ၊ App တွေရဲ့ Preview တွေနဲ့ နောက်ဆုံးထွက် App တွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. အထူးသဖြင့် Xioami ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Firmware တွေကို ချက်ချင်း သိရှိရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. Xioami User တွေနဲ့ ဖုန်း Service သမားတွေ ဆောင်ထားသင့်တာပေါ့..
Android 4.0 နဲ့အထက်မှ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်..
Download Xiaomi MIUI Forum apk 1.0.5 : 12.2 Mb
Android Application Phone Application Player
Maung Pauk at 9:04:00 PM 0
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ကောင်မလေးတွေ၊ ကောင်လေးတွေနဲ့ ချိန်းပြီး ကာရာအိုကေ ဟဲတဲ့ Smule apk ဗားရှင်းသစ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. သီးချင်းပုဒ်ရေ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှာဖွေ သီဆိုနိုင်ပြီး. ကိုယ်တစ်ဦးတည်းလည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်... ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Update Version ဖြစ်ပါတယ်..
Bigger changes coming next time! Happy singing!
Download Smule v4.0.7 apk : 44.4 Mb